Ndị Ngụgụ Akwụkwọ Free 9 kachasị mma
Ngwa & ngwa Ndabere & Akụrụngwa
Ndị a na-eme ka edebanye aha na ihe ikuku.
Ọtụtụ n'ime anyị na-ezute PDF na oge ụfọdụ ma ọ bụ ihe ọzọ, bụrụ ya mgbe ị na-edebanye aha akwụkwọ metụtara ọrụ, nbudata akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ egwu. Ngwa ngwa ngwa PDF na ngwa ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa Windows nwere ike ọ gaghị ebipụ ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụzu ọrụ ndị dị elu dịka ịkọwa akwụkwọ, kewaa PDF n'ime ibe ma ọ bụ karịa.
Nke ahụ bụ ebe mmemme a na-abata. Gbanyere ndị na-agụ akwụkwọ PDF a mgbe ịchọrọ ihe dị mma karịa ihe ndị dị ugbu a na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa.
01 nke 09
Ihe siri ike: Microsoft Office-Style "ihe ntanetị" ihe nchọgharị ngwaọrụ, PDF na-edezi ma na-eke na mgbakwunye na nlele, nke dị na nzụlite dịgasị iche iche
Ọgụgụ Foxit PDF ga-esite karịsịa na ndị na-arụ ọrụ na Microsoft Office, dịka ngwa a jiri ngwa ngwaọrụ ihe yiri nke ahụ na ọtụtụ taabụ nwere ike ahaziri dabere na omume ị chọrọ ịnweta ọtụtụ ugboro. Foxit na-akwadokwa touchscreen ngwaọrụ Windows, n'ihi ya ị nwere ike ime ka Touch mode iji soro usoro ihe ahụ na-emekọrịta ihe site na mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ị nwere PC touchscreen.
Ihe ndị ọzọ dị elu na ndị ọzọ gụnyere ike ichebe faịlụ PDF na okwuntughe, asambodo na ndị ọzọ; banye PDFs digitally; jikọta multiple PDFs na ịnweta PDF site na isi mmalite ndị dịka Google Drive, DropBox na OneDrive.
02 nke 09
Isi ihe dị mkpa: Ọdịdị ime mmụọ maara nke ọma na ọtụtụ (karịsịa na mkpanaka), dị n'ofe ọtụtụ nyiwe, ọtụtụ ederede na nhazi ihe omume, ikike iji nweta akwụkwọ e-banye.
Ụdị desktọọpụ nke Adobe Acrobat Reader bụ n'ezie na njedebe, na mpempe akwụkwọ na nhọrọ ndị na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ime ka ihe dị mfe dịrị ogologo karịa ka ha kwesịrị. Otú ọ dị, ngwa ngwa nke ngwa ahụ bụ akụkọ dị iche. Nchịkọta nhọrọ ahụ kwụ ọtọ, ị ga-enwekwa ike ịrụzu ọtụtụ ihe, site na ịpịpụta PDFs iji kọwaa ha site na ịbịaru ngwaọrụ ma ọ bụ nkwụnye akwụkwọ iji nyochaa akwụkwọ na igwefoto ekwentị gị. Ịnwere ike iṅomi ọtụtụ akwụkwọ wee debe ha dịka otu PDF.
Njirimara ndị ọzọ gụnyere ike i-banye akwụkwọ iji mkpịsị aka gị, na-ebipụta akwụkwọ sitere na ngwaọrụ gị ma weghachite ma hichapụ ibe na PDFs. Ịnwekwara ike ịchekwa PDF dị ka Microsoft Excel ma ọ bụ faịlụ Word nwere ike dezie.
03 nke 09
Isi ihe dị mkpa: Ngabido arụnyere na Macs ka ị ghara ibudata ya, interface dị mfe iji rụọ ọrụ, ntinye aha na ntinye ederede, ike iji akwụkwọ e-banye.
Gbanye na Mac sistemụ arụmọrụ (nke pụtara na ị nweghị ibudata ya ma ọ bụrụ na ịnwe kọmputa Apple), Preview bụ ezigbo ngwa maka ịlele ma kọwaa akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmepe ma gụọ PDFs oge ụfọdụ na kọmputa gị, ị nwere ike ime n'enweghị nbudata ọzọ.
Mana karia nani imezu isi ihe, Preview na-enye gi ohere ichota ma banye akwukwo, juputa uzo, dezie ihe oyiyi na ihe ndi ozo. Ọ bụ ihe karịrị ụlọ ike karịa i nwere ike iche.
04 nke 09
Isi ihe ndị dị mkpa: Dị mfe ma dị mfe, ngwa ngwa, nkọwa zuru ezu, PDF ntọghata.
Ọ bụrụ na mkpa gị na-agụ akwụkwọ na-ede akwụkwọ na-ederede dị mfe, MuPDF kwesịrị ime ihe atọ ahụ. Ngwa a, maka gam akporo na Windows yana nchịkwa nke Apple, dị oke ọnụ, nke mmemme na-ekwu okwu maka nbudata nke na-adịghị eburu ọtụtụ ebe nchekwa ma dị n'akụkụ dị mfe dịka ọrụ si aga.
Ị nwere ike jupụta n'ụdị ederede, tinye akwụkwọ edemede na akwụkwọ mpịakọta PDF na ụdị dị iche iche nke faịlụ (gụnyere HTML, SVG na CBZ). Ọdịiche ahụ bụ kama ọkpụkpụ, nke nwere ike ịbụ nnukwu gbakwunyere ma ọ bụrụ na nhọrọ-ngwá ọrụ dị arọ nke ndị na-agụ akwụkwọ Microsoft Office na-emetụta gị.
05 nke 09
Isi ihe dị iche iche : Ọrụ dị iche iche dịgasị iche iche karịa ederede PDF. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-agbanwe ụdị faịlụ ndị ọzọ na PDF, na-ahapụ gị ka ịlele annotations na PDFs ị na-emeghe na ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ WPS bụ n'ezie ngwa ngwa Microsoft Office (dịka aha ya na-egosi), ya mere, ọ bụghị naanị ikwe ka ị mepee ma lee PDFs. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere ike ime nke ahụ, ọ na-ahapụkwa gị itinye mgbakwunye ibe edokọbara na PDF ma lelee annotations. Ọ bụghị nhọrọ kachasị mkpa na listi a mgbe ọ bịara na PDF - ma rịba ama na ọ dịghị agụnye ikike dịka ederede - ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ PDFs na kọmputa gị ma ọ bụ ama, ị kpuchiela. Ọ na-enyekwa gị ohere ịmegharị ụdị faịlụ ndị ọzọ na PDF.
Njirimara ndị na-abụghị PDF nwere ike ịnweta ma dezie akwụkwọ sitere na draịvụ ojii, ụyọkọ, ngwá ọrụ edemede na ngwá ọrụ ngosi.
06 nke 09
Isi ihe dị mkpa: Mepụta PDFs site na ihe omume Windows ọbụla, akwụkwọ akara, tinye paswọọdụ nchedo na PDFs na ndị ọzọ.
Nke a PDF na-agụ naanị maka Windows, n'ihi ya ị gaghị enwe ike iji ya PDF edezi ma na-elele na ekwentị gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na usoro desktọọpụ dabara na ụgwọ ahụ, Nitro PDF Reader nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye. Ọ na-enye gị ohere ịmepụta PDFs site na nnukwu ngwa ngwa nke Windows na ihe karịrị narị faịlụ 300, ihe niile i nwere ime bụ ịdọrọ na dobe faịlụ iji mepụta PDF.
Ị nwere ike ịbanye akwụkwọ, paswọọdụ-chebe akwụkwọ, gbakwunye ndetu aha, kọwaa ederede, gbakwunye njikọ na ọnụọgụ na ihe ndị ọzọ. Nitro PDF Reader nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ ndị ọzọ a na-ewu ewu na Adobe Reader n'ihi mmesapụ aka nke atụmatụ ya.
07 nke 09
Isi ihe ndị dị mkpa: Usoro ziri ezi na nke dị arọ, na-akwado ọtụtụ mmụba ụdị faịlụ, ngwa ngwa.
SumatraPDF bụ nhọrọ ọzọ dị oke oke, ma na mgbakwunye na ịrụ ọrụ dịka onye na-agụ PDF, ọ nwere ike imeghe ma hụ ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ na faịlụ CBR. N'ihi na ọ naghị agụnye ọtụtụ ihe mgbakwunye ma ọ bụ ntụsara ahụ, a maara ihe omume ahụ maka iwepụta akwụkwọ ngwa ngwa na n'ozuzu ịbụ ngwa ngwa. Ọ na-agụnye ọtụtụ ụdị elele anya.
08 nke 09
Akwụkwọ Google Play
Isi ihe siri ike : Achọpụta akwụkwọ maka akwụkwọ e-akwụkwọ na ndị na-egwu egwu, karịsịa ma ọ bụrụ na i jiri Google Play Akwụkwọ ịzụta ma gụọ utu aha.
Ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị dị na PDF gị gụnyere ịgụ akwụkwọ e-akwụkwọ kama ịkọpụta akwụkwọ, nke a nwere ike ịbụ usoro ihe omume ahụ maka gị. Na mgbakwunye na ikwe ka ị bulite faịlụ EPUB na PDF gaa n'ọbá akwụkwọ gị, Google Play Books na-enye gị ohere ịmepụta ihe ederede na mmekọrịta n'ofe ngwaọrụ ka ị ghara ịlafu ebe gị n'ime akwụkwọ.
09 nke 09
Isi ihe dị mkpa: PDF agụrede ziri ezi, nke kwekọrọ na akwụkwọ ezoro ezo, ụlọ ọrụ (Drumlin Security) na-elekwasị anya na nchedo software.
Egwuregwu bụ otu nhọrọ ikpeazụ ọkpụkpụ, nke dị n'ofe niile isi kọmputa na nhazi ihu igwe. Ọ nwere ike inyere gị aka imezu isi ihe dịka ịchọta faịlụ PDF dị mma ma dakọtara na faịlụ PDF ezoro ezo.
Nke a bụ n'ezie onye na- agụ PDF, ebe ọ bụ na ị pụghị ime ihe dị ukwuu na akụkụ nhazi ya na nbudata a. Ịnwere ike idezi akwụkwọ, mana na njedebe atụmatụ ahụ bụ ihe gbasara ihe oriri, na ikike nke ibe ibe edokọbara, pịa hyperlinks ma mee ka ederede ederede. N'ezie, ọ bụghị nhọrọ mgbịrịgba na whistles, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe niile ị chọrọ, ị ga-ahụ ihe ị na-achọ na ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ na ndepụta a.
Ndabere igwe na-adị iche karịa ntanetị weebụ?
Ezigbo Nwepu Ihe Mmemme v2.2.4
Onye Nchọta Ihe Ngwaahịa v2.2.4
PC Nbanye Ugbu a v2.0
Kedu ka Email, IM, Forums, na Chat dị iche?
Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Nzọụkwụ Ntugharị Nye Data Nintendo 3DS
Kpọgharia aha (Iweghachite njikwa)
Esi Ntughari Mgbakwunye site na Outlook Mail na Outlook.com
Ot'u esi eme ka ibe gi di na Maxthon maka Windows
Otu esi Email Email Ndepụta na Ọrụ Gmail
Ihe ngosi RF - Njikọ Njikọ DVD
Nlekọta nke TV UD27 THX 4K Ultra HD TV
IOS 9: Isi ihe
Kedu ihe bụ Wireframe?
Ebe Mmasị Maka Echere Christmas Art
Esi mee ka redio ma ọ bụ Radio Redio Redio gosi Radio AM, FM, ma ọ bụ Satellite
Nkuzi Mgbasa Ozi Ntanye efu
Mac os X Ọ bụghị Linux Nkesa, Ma ...
Amazon Fire TV: Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Kedu ka esi eme ka ihu na igwe
Blu-ray nke Ex Machina Atụmatụ DTS: X-Encoded Soundtrack
Tekken Tag ndorondoro Ndị aghụghọ maka PS2
Ulo oru Ulo ala ndi ochichi US nke kachasi abuo
Nyochaa: Igwefoto Nchekwa Intaneti nke Logitech 700n